Sawirro: Galmudug oo gaadiidleyda u qabatay in 10 Maalmood ay ku qaataan Taarikada Cusub - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sawirro: Galmudug oo gaadiidleyda u qabatay in 10 Maalmood ay ku qaataan Taarikada Cusub
Sawirro: Galmudug oo gaadiidleyda u qabatay in 10 Maalmood ay ku qaataan Taarikada Cusub
September 20, 2016 admin6225 Comments on Sawirro: Galmudug oo gaadiidleyda u qabatay in 10 Maalmood ay ku qaataan Taarikada Cusub
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Cadaado kaga dhawaaqay in muddo ku siman toban maalin kadib deegaanadooda aysan ka shaqeyn Karin gaadiid aan wadan taariko cusub oo uu maamulku maanta soo bandhigay.
Kulan lagu daah furayay qorshahani oo ay soo diyaarisay wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka qeyb galay Madaxweyne ku xigeenka maamulka Maxamed Xaashi Cabdi iyo masuuliyiin kale.
Wasiiru dowlaha gaadiidka Galmudug Cabdulle Xasan Nuur ayaa sheegay inay dhamaan soo dhameystireen sharciyadii gaadiidka bulshaduna wixii maanta ka danbeeya qaada karaan, wasiirka amniga Galmudug Cismaan Ciise Nuur oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay la shaqeydoonaan wasaarada gaadiidka qaashada taargada ayna arintan sare u qaadayso amniga dowlad goboleedka Galmudug.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay ” muddo ku siman toban maalin ay gaadiidleyda waqti u heystaan cidii mudadaas kadib lagu arko taariko aan aheyd tan Galmudug ay talaabo ka qaadi doonaan ciidamada amnigu”.
Waa markii ugu horeysay ee maamulka Galmudug yeesho taariko u gaara tan iyo dhismihiisii oo ay kasoo wareegtay sanad iyo bilooyin waxana ay imaneysaan arintaani iyadoo maamulka puntland uu dhawan xanibay isku socodka gaadiidka ganasiga isla markaana kala wareeg ay u tahay magaalada gaalkacyo, soo saarista Taarikadan cusub ayaa waxaa daabacday shirkadda Galeyr oo Galmudug ka howlgasha.
Soomaaliya ma aqoonsana Heshiiskii 2009
Cumar C/rashiid oo Garowe u tagaya si uu taageero uga helo Puntland
Maxaa ka cusub Koofurta gobolka Mudug?
Sawirro: Dhalinyarada Galkacyo oo doortay guddoon cusub
Hoggaamiyihii Taliban ee loo haystay inuu 'mar hore dhintay' oo khudbad jeediyay
Hoggaamiyihii Taliban ee loo haystay inuu ‘mar hore dhintay’ oo khudbad jeediyay
July 2, 2022 July 2, 2022 admin 0